Archive du 20180907
Vao nandalo Ravalomanana Nangorom-potsy i Maevatanana
Ny tanànan’i Maevatanana no nandalovan’ny kandida Marc Ravalomanana omaly tolakandro, ka fitsenana makotrokotroka no nandraisan’ny vahoaka azy.
Andry Rajoelina Hamerina ny tamin’ny 2009…
Efa ady ity fa tsy sangisangy sy vazivazy na don-tandroka fotsiny eo amin’ny samy mpikatroka politika, indrindra fa ny kandida na vondron-kery mikendry ny hisian’ny fihemoran’ny fifidianana sy ireo mivoy ny hisian’izany.
HCC Andrim-panjakana mampisavorovoro
Andrim-panjakana tsy azo ihodivirana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana saingy mampametra-panontaniana ny maro ireo fanapahana noraisin'ireo mpanolotsaina avo ao Ambohidahy.
Fitakiana fanemorana fifidianana Samy manana ny heviny ny olona
Samy manana ny heviny na olon-tsotra na mpanao politika na mpitondra fikambanana manoloana ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena teo aloha, Didier Ratsiraka, izay mitaky ny hanemorana fifidianana. Hoy izy ireo :
Hery Rajaonarimampianina Andro farany
Hanao veloma amin’ny maha filoham-pirenena voafidim-bahoaka azy i Hery Rajaonarimampianina mety ho amin’ity anio 7 septambra ity,
Hetsika Fanorenana Ifotony Miantso ny miaramila hijoro
Namoaka fanambarana tetsy amin’ny biraony etsy Antaninandro omaly ry zareo avy eo anivon’ny Hetsika Fanorenana Ifotony ( HFI) nanoloana ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena teo aloha, Didier Ratsiraka.
Zakahely Boniface “Io governemanta io no olana”
Tsy governemantan’ny marimaritra iraisana izany no eto, hoy ny mpanao politika, Zakahely Boniface.
Fahanginan’ny Malagasy Tsy hampandroso mihitsy ny firenena
Raha aty Afrika no jerena dia anisan’ny firenena tena mbola milamina i Madagasikara na dia mandalo krizy matetika aza. Saika nisy hatrany ny ra latsaka tamin’ireny lazaina hoe tolom-bahoaka niseho rehetra ireny.
Ntsay Christian “Tsy maintsy hotanterahina ny fifidianana”
Nampiantso fivoriana niarahana tamin’ny OMC manerana ny nosy, ny praiminisitra Ntsay Christian, nijerena ny zava-misy ankehitriny mikasika ny fandriampahalemana.
Ramtane Lamamra “Anjaran’ny samy Malagasy ny mitady marimaritra iraisana”
« Mitazona ny datin’ny 7 novambra sy 19 desambra hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny governemanta”.
Vonjy Iray Tsy Mivaky Nivoaka tamin’ny fahanginany
Manao tohivakana ny fanehoan-kevitr’ireo antoko politika manoloana ny fifidianana.
Lisitra sy ny biraom-pifidianana Andrasana ny fivoahany ao anaty gazetim-panjakana
Ao anatin’ny fikarakarana ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena tanteraka ny CENI amin’izao fotoana izao.
Manao ahoana ry Jean a ? Mbola mandrimandry manan-draharaha hatrany ve eo anatrehan’ity efa loza mitatao ity e ?
Jean Ravelonarivo Hatao lavanty ny fananany
Hatao lavanty ny fananan’Atoa Jean Ravelonarivo mivady, kandida ho filoham-pirenena, araka ny fampahafantarana mivoaka an-gazety omaly teto an-drenivohitra.
Kianjan’i Mahamasina Ny Barea sy ny Senegaley sisa mahazo miditra ao
Efa mitondraka isan’andro ny bozaka etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, hoy ny tale misahana ny kolontsaina sy ny fiainam-piarahamonina ao amin'ny CUA,
Mpilomano zazavavy Nahita ny tsy fahita tany Sina
Noraisina tamin’ny fomba mendrika tao Antsirabe ireo atleta efatra mirahavavy, solontenan’i Vakinankaratra niatrika fiofanana nandritra ny dimy volana tany Sina.
Jean Omer Beriziky Manohana ny kitra malagasy
Nambaran’ny praiminisitra teo aloha sady kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, Jean Omer Beriziky, fa “Fanoitra hialan'ny tanora amin'ny zava-mahadomelina ny fanatanjahantena ka tsy maintsy omena tosika”.
Fiara 2 nifandona 6 maty tsy tra-drano
Enina no namoy ny ainy noho ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina nitranga tany Sakaraha amin’ny lalam-pirenena fahafito ny takarivan’ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 6 ora sasany.
EPP Mahavelona Nahazo loka ireo mendrika tamin’ny CEPE
Ankizy kamboty sy zanaky ny sahirana ara-pivelomana avokoa ny ankamaroan’ireo mpianatry ny sekoly ambaratonga fototra ao Mahavelona.
Miha miverina tsikelikely ny fitsikafonana ireo afera voalaza ho maloton’ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Mahafaly, niaraka tamin’ny mpanolontsain’ny filoham-pirenena teo aloha, Claudine Razaimamonjy. Ho sahirana ity praiminisitra ity.
Fambolena sy fiompiana eto Madagasikara Mila matihanina ireo mpisehatra aminy
Nampahafantarina omaly alakamisy tetsy amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina ny fisian’ny foara lehiben’ny fambolena sy fiompiana andiany faharoa (FIA).
Taham-pitadiavana nahandro gasy Niampy 30% tao anatin’ny 5 taona
Hiditra amin’ny andiany faha-5 ankehitriny ilay fetin’ny nahandro gasy fanao isan-taona etsy Andohalo na ny Haify Mampiavana. Araka ny fanazavan’ireo mpikarakara dia tranoheva miisa 40 eo no handray anjara amin’izy ity ny 21 ka hatramin’ny 23 septambra izao.
FIKIRIZANA Antanetikely Ambohijoky Manao fiompiana sy fambolena manara-penitra “BIO”
Nitsidika toeram-piompiana akoho gasy tantanin’ny fikambanana FIKIRIZANA teny Antanetikely Ambohijoky Antananarivo Atsimondrano ny vondrombavaka manerana ny Boriborintany enina, eo ambany fiahian’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana.
Anjozorobe Mirongatra ny vaky fasana
Saika isan-kerinandro na latsak’izany aza no hisian’ny vaky fasana any amin’iny faritra Anjozorobe sy ny manodidina iny, raha ny fampitam-baovaon’ny mponina any an-toerana.
Mpandraharaha mpanafatra vary Miomana hiatrika ny maitso ahitra
Tao Toamasina ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana ramatoa Yvette Sylla, omaly, nifampitafa sy nidinika tamin'reo mpandraharaha mpanafatra vary,
Fananana tsy ara-drariny Andrasana ny fandaniana ny lalàna
Ny mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola dia mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny Parlemanta amin`ny fandaniana ny lalàna momba ny fanarenana ny fananana tsy ara-dalàna.